Pakistan: Dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda oo ruxaya Islamabad – Kasmo Newspaper
Pakistan: Dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda oo ruxaya Islamabad
Updated - November 26, 2017 12:51 pm GMT
London (Kasmo), Dibadbaxyo rabshado wata ayaa maalintii 2aad ka soconaya Pakistan, kuwaas oo ka dhacaya daafaha Caasimadda Islamabad, una dhexeeya Koox diimeed TLY (Tahreek-i-labayk Ya Rasool Allah) iyo ciidammada nabadgalyada.
Khasaaraha dhimashada ayaa hadda maraysa 6 qof iyo 1 askari oo Boliis ah oo Sabtidii ku dhintay, in la badan 160 qof waa dhaawac, 80 ka mid ah askar yihiin, ilaa 300 oo kalena xabsiga ayaa la dhigay.
Xisbi diimeedka TLY ee uu hoggaamiyo Khadim Hussein Razvi (Sawirka hoose) waxay curyaamiyeen isu socodkii waddada halbowlaha ah ee isku xirta Caasimadda Islamad iyo Rawalpindi, iyaga oo codsanaya istiqaaladda Wasiirka caddaaladda, Zahid Hamid.
Dibadbaxyada oo kumannaan ka tirsan Kooxdaasi wadaan ilaa bilowgii Nofember darteed, Xukuumaddu waxay maanta codsatay militarigu in ay soo faragaliyaan. Taliyaha Xoogga, Jeneral Qamar Javed Bajwa oo booqasho ku marayay UAE ayaa safarkiisa soo gaabiyay, dibna ugu laabtay Islamabad, kaas oo maanta kulan la yeelan doona R/Wasaaraha Shahid Khaqan Abbazi.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadli doona qaabkii Militariga loo adeegsan lahaa, si loo soo celiyo nidaamkii, iyada oo la tixgalinayo amar jira oo Maxkamadda Sare ku mamnuucayso isticmaalka hubka, si loo kala eryo dadka.
Xaaladda ayaa wali cakiran iyada oo Hay’adda Maamulka Isgaarsiinta (Regulatory Body for Electronic Media), si ayan u baahin, ka joojisay Tv-yada tebinta dibadbaxyada, isla markaasna ka joojisay barihihii Bulshada, sida (Youtube, Twitter iyo Facebook).